दुई अमेरिकी र एक बेलायतीलाई रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार
अर्नोल्ड, स्मिथ र विन्टरलाई रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार
अक्टोबर 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments रसायनशास्त्र
१८ असोज, काठमाडौं । सन् २०१८ को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकहरू फ्रान्सिस् अर्नोल्ड र जर्ज स्मिथ तथा बेलायती अनुसन्धानकर्ता ग्रेगरी विन्टरलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ ।
‘द रोयल स्वीडिस् एकेडेमी अफ साइन्सले बुधबार ती तीन व्यक्तिलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा भएको जानकारी दिएको छ । जैविक इन्धनदेखि औषधिसम्मका हरेक वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने प्रोटिनको विकास गर्ने उत्पत्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोमा उहाँहरूलाई यो पुरस्कार दिइने भएको हो । उहाँहरूले ‘डिरेक्टिड इभ्युलुशन’ नाम दिइएको प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ प्रोटिन बनाउनु भएको थियो ।
यस विधिबाट उत्पादित एन्टिबडी सन् २००२ मै औषधीय प्रयोगका लागि स्वीकृत भएको थियो । बाथ, सराइअसिस भनिने चर्मरोग र पेटमा हुने विभिन्न रोगको उपचारमा त्यसको प्रयोग हुने गरेको छ । पुरस्कार पाउनेमध्ये अर्नोल्डले ९० लाख स्वीडिश क्रोनर अर्थात् झन्डै १० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राशिको आधा भाग पाउनुहुनेछ भने स्मिथ र विन्टरले बाँकी रकमको आधा आधा पाउनुहुनेछ । (एएफपी)
भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार स्ट्रक्ल्यान्ड, आर्थर र मोरूलाई
← DNA (डीएनए) भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ?
वैज्ञानिक कसलाई भनिन्छ ? →
अक्टोबर 10, 2019 अक्टोबर 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
सन् २०१७ को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकलाई
अक्टोबर 4, 2017 अक्टोबर 5, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0